Ubele waseWelgium Corgi Pembroke wabonakala ixesha elide, imvelaphi yaloo mfuyo inokulandelwa emva kwekhulu le-12. Kwakhona kukho uhlanga lwaseWelgi Corgi Cardigan, oluninzi lwadala. Ezi ntlobo zithandwa kakhulu kwiBritani, kwintendelezo yeNdlovukazi yaseBrithani eNkulu yaseBrithani unokudibana nale ncinane yegusha.
Kukho umlando wokuthi u-Corgi uzalisekile njengesipho kubantu abavela kwi-fairies kunye nomlingo kukuba kule nja encinane kukho umoya oqinileyo, ngaphandle kwalokhu kuzisa uthando olukhulu, uvuyo kulabo abagcina le ntja ekhaya.
Umbala wezinja ubumnyama obomvu, i-fawn okanye ibomvu kuphela. Vumela ubukho bamanqaku amhlophe entloko, ubuso, isifuba, intamo kunye neengalo.
Kukho uluvo lokuba igama elithi "Corgi" livela kulwimi lwaseCeltic, ekuguquleleni ukusuka kulo "cor" lithetha "i-dwarfish, encinci", ngaphandle kokuba ingahunyushwa ngokuthi "ikhaya" okanye "umlindi", kwaye ukuba ungeze " "Okanye" i-ci ", ngoko igama lithetha" inja ". Ukuba ukuguqulela ngokoqobo, kuthetha "inja encinci yenkomo yenkomo". Kwakhona, kwisiXhosa isiXhosa igama eliguqulelwe ngokuthi "elibi, eliqhelekileyo" - "i-cur". U-Corgi unobungane kwaye uyayilungisa izinja, ngoko ke abaphandi bavame ukuqala kokuqala kwemvelaphi.
I-Cardigan kunye nePembroke ziintlobo ezahlukeneyo zezinja, eziye zahluke ngokwahlukileyo, zinempawu ezahlukileyo, ukuziphatha. Ukuba iWelgi Corgi Cardigan ivela kwingingqi yaseCardiganshire, esecaleni lasentshonalanga yeWales, ngoko okwesibini ukusuka kumzantsi - iPembrokeshire.
Ekuqaleni, la mawa ayekwahluke kakhulu, kodwa ngoku anento ebonakalayo ebonakalayo. Kwixesha la mandulo, kwakunokwenzeka ukudibana nezinja ezahlukileyo phakathi kwezi zizwe, zahluke zombini ubude bomzimba, ubude bomsila, umbala nokuphakama. Ngamashumi amabini wenkulungwane ye-20, iqela laseWelgi Corgi laqatshelwa njengohlobo oluzimeleyo kwaye iqela lobuhlanga lulungiswa iminyaka emininzi kamva. Umehluko oqineleyo phakathi kohlobo lwe-Pembroke kukuba ukungabikho komsila walo, ngokungafani neCardigan. Izinja ze-Welsh Corgi zozalana i-Pembroke zizalwa ngokukhawuleza ngaphandle komsila kwaye le nzala iyadluliselwa ngumzimba ophezulu. Nangona eBrithani kwithuba elithile kwakuye kuvunyelwe ukuvalwa komsila, ulwahluko phakathi kwezi zimbini lwaba luphawuleka ngakumbi, babonwa njengento engathandekiyo ukuzalana ndawonye, ​​njengoko ukungafani kwagqithiswa. Kwiimiboniso ngelo xesha, ezi zinja zazingabomhlaba ofanayo, kwada kwavela ubunzima ekuphononongweni, ngoko ngonyaka wama-26 wekhulu lemashumi mabini ubuhlanga lwahlula zibe ziintlobo ezimbini. Kule nkalo, iqela lolo luhlu lwahlula ngamacandelo amabini kwaye sele lusemnyakeni wama-34 ezi ziqulathwe ngokusemthethweni yiNgesi "yeKennel Club".
Umntu waseWelgi Corgi Pembroke
UWelgi Corgi uPembroke unesihawu kwaye unomdla, unomdla, kwaye ngoko ke unomdla ngokusingqongileyo kwimeko yakhe, eyahlukana naye eCardigan. Ziyizinja ezivuya kakhulu, inamandla, inzululwane, ingabonakali, abayazi ukuphelelwa yithemba kunye nesizungu, oko kukuthi, baqiniseke ngokupheleleyo. Abanye bathi nokuba bayazi indlela yokuthetha kunye nokumomotheka. Abanye bathi banamakhono okwenza i-telepathic, kuba banokwazi ngokumangalisayo ukuba baqiqa njani iiminqweno zabo. Esi sipho sibancedisa ekukhangekeni kwansuku zonke into enhle. Ukuba umnini uxakekile kwaye akawunaki inja, ngoko u-Corgi uthanda ukulala phantsi, apho i-slippers elala khona okanye ebhedeni, eselulele ekuphakameni okupheleleyo, ngelixa baqhele ukulungisa imilenze yabo. Ukuba ukucwangciswa kuhleliwe, ngoko badla konke ukutya okuya endleleni, banesidlo esihle kakhulu.
Okwangoku, olu luhlobo lukhulile njengenja yokuhlobisa, inja yenkwenkwezi, njengoko ezi zinja zizinikezele kumnini, zithandekayo kwaye zidlale. Kodwa zonke ezi zinto zinezakhono zomlindi, enentliziyo enomusa, ohloniphekileyo, impilo enhle kunye nobulumko obufanelekileyo.
Ukunyamekela nophuhliso lomzimba
Ukuthetha ngokushiya, le nto inja engathobekanga, kulula kwaye ikulungele ukuyilinda; ngaphandle kwalokhu usebenza nzima kwaye unamandla. Ngokuqhelekileyo akufuneki ukuba uhlambe, kwanele ukuhlambulula iinwele ngebhayisiki, eya kususa iphunga elimnandi.
Ukususela kwiinyanga zokuqala kubalulekile ukufundisa iintsana ukuba zisebenzisane nabantu. Izinja zalolu hlobo ziyakuthanda kakhulu ukugubha zonke izinto eziza emehlweni abo, abazenzi ngengozi, kodwa ngenxa yokuba banamandla amaninzi namandla. Ukuba abanini banqwenela ukugcina izinto ezibalulekileyo nezibalulekileyo, kufuneka zigcinwe kwindawo engafinyeleleki kuyo inja.
Xa uqeqesho luka-Corgis, abayithandi ukwenza imiyalelo yabantu, bakhetha ukuhlaziya. Zihlala zigijime ngeenxa zonke okanye zijikeleze ifenitshala, zichaza isibalo sesibhozo, kubonakala ngathi zizonwaba. Ngemihlanga yabo, bachitha amandla amaninzi kunye namandla, ngokulandelanayo, bafuna ukutya kakhulu kwaye kaninzi. Nangona kunjalo, kufuneka badliwe ngokwemilinganiselo, ukuphepha ukutya ngokutya, ekubeni lo mfuphi ulungele ukukhuluphala.
Ubukhulu kunye nobukhulu bohlobo lwe-Welsh Corgi Pembroke
Ukuphakama kokusuka, bafikelela kuma-25-30.5 cm, ngelixa le nto isebenza kubini abesilisa nabesifazana. Ukuba sithetha malunga nomlinganiselo wobude be-trunk ukuya phezulu, ngowama-2.5 ukuya ku-1.
Ubunzima bendoda buhlala ukusuka kwi-11 ukuya ku-13.5 kg., Kwabafazi-ukusuka kwi-10 ukuya ku-12.5 kg.
Iintlobo zokuthetha iiproti
Ukunyamekela i-parrot yokukhwabanisa
Ukupheka kwezitsha ezintsha zokuqala zonyaka oNtsha
Iqoqo le-makeup le-Lancôme Summer Bliss 2016
Iimpawu eziwusizo ze-gooseberry
I-Queen of berries: zokupheka kwe-cranberry jam efanelekileyo
I-Horoscope ngo-Agasti 2017 esuka kuVasilisa Volodina: Indlela yokusebenza kwinyanga enzima yehlobo
I-Anti-cellulite yongxenga nodongwe
Itafile yonyaka omtsha 2015 Imvu, zokupheka kunye nesithombe
Idlalwa njani i-Pokemon Iya eRashiya - yintoni i-lifhaki? Ndingadlala njani i-Pokemon Go kwikhompyutheni yam?